नेपाल आज | ‘ओलीले सहयोद्धाकै राजनीति ध्वस्त वनाए, प्रचण्ड–माधव समुहले जनतासँग माफ माग्नुपर्छ’ [भिडियोसहित]
समाचार भिडियो देश राजनीति अन्तरवार्ता
म मालिक हुँ, तिमीहरु सवै दास हौ भन्ने सोचले ओली निरंकुश भए
युवा कम्युनिष्ट नेता शिव फुँयलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्युनिष्ट नै नभएको वताउँदै कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेर ओलीले सत्ता र पार्टी दुवैको हुर्मत लिएको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपाको विभाजन र देशको राजनीतिक अवस्थाका विषयमा नेपाल आजसँगको विशेष कुराकानीमा उनले यस्तो वताएका हुन् । ‘वहाँ कम्युनिष्ट नै होईन र कम्युनिष्टको ‘क’ पनि सुन्न सक्नु हुन्न’ उनी भन्छन्–‘कम्युनिष्टमा लागेर सत्ता प्राप्त गर्नु’भो अनि सत्ता र पार्टी दुवैको हुर्मत लिनु’भो ।’
केपी ओलीको कुनै सिद्धान्त र विचारधारा नै नरहेको फुँयलेको जिकिर छ । ‘चिन्तन र सोचका आधारमा केपी ओली ‘चरी घैंटे विचारधारा’ को मान्छे हो’ उनले भने–‘त्यहाँ एउटा ग्याङ हुन्छ, त्यसले सत्य, तथ्य, तर्क र सहि के हो भनेर हेर्दै हेर्दैन। त्यसले आफनो ग्याङ हेर्छ र आफनो मान्छे हेर्छ । आफनो मान्छे जस्तो खराव भएपनि सहि भन्छ, अरुलाई जति राम्रो भएपनि सहि भन्दैन। र आफनो ग्याङ प्रति मात्रै प्रतिवद्ध हुन्छ।’
संचार मन्त्रीको ७० करोडको भ्रष्टाचारको कुरा आयो प्रधानमन्त्रीले केहि नभए झै गरेर सिद्याएको उनको आरोप छ । ‘प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो होईन भन्दिनु भो’ उनले प्रश्न गरे–‘वहाँ न्याधिस, अख्तियार प्रमुख के हो ? वहाँले मन्त्रीलाई जेलमा राखेर अनुसन्धान गर्न दिनुपथ्र्यो नी।’
ओलीले भन्ने र गर्ने कुरामा आकाश र जमिनको फरक रहेको उनको वुझाई छ । ‘विगतमा वहाँको योगदान के छ थाहा भएन तर ०४६ सालपछिका सवै गतिविधि हेर्दा वहाँ हरेक परिविर्तनको विरोधी हुनुहुन्छ’ उनले थपे–‘वहाँ जवजको कुरा उठाउनु हुन्छ। जवजको मुल सिद्धान्त भनेको सवैको विचार सुन्नु र वहुमतको कदर गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर, वहाँ विधि, पद्धति, विचार र वहुमत पनि नमान्ने भन्नु हुन्छ। म भन्दा अरु कोहि होईन भन्ने मान्छे निरंकुश हो।’
काम गर्न नदिएको भनाई वेतुकको
प्रधानमन्त्री आलीले प्रचण्ड–माधव समुहवाट सहयोग नपाएको र सधैं घेरावन्दिमा परेको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नरहेको फुँयलले वताए । ‘वहाँले भनेको पनि सहि नै होला, तर यो यो काम गर्न दिएनन भन्नु पर्योनी त’ उनले भने–‘वहाँलाई लागेका र वहाँका स्वार्थका सवै काममा साथ दिनु पर्ने हो र ?’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा वहालवाला सांसद र पुर्व प्रहरी महानिरिक्षक सांसद अपहरणमा गर्न गएको प्रशंग कोट्याउँदै त्यस्ता काममा भने उनलाई असहयोग नै भएको फुयलले वताए । ‘वैसाख ८ गतेको अध्यादेशले ल्याएको समस्या होईन त’ उनले प्रश्न गरे–‘त्यो जरुरी थियो ?’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई देश र जनताका लागि काम गर्ने कुनै इच्छै नभएको पनि उनले वताए । ‘देश र जनताप्रति कुनै मतलवै छैन । यति ग्रुप, ओम्नी ग्रुप तथा केहि पुर्व कर्मचारी र सिमित घरानियाको वरीपरी सानो समुहमा आधारीत भएर उनीहरुको स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्नु भएको हो’ उनले भने–‘वहाँले भन्नु पर्यो नी जनताको पक्षमा के के गरें ?’
लकडाउनको समयमा सर्वसाधारण २ हजार किलोमिटर हिडेर घर जाँदा पनि देशको सवैभन्दा ठुलो पार्टीले केहि गर्न नसकेकोमा उनले दुखेसो गरे । ‘यत्रो ठुलो पार्टीका कार्यकर्तालाई स्वयमसेवकमा खटाएर उनीहरुलाई सहयोग गर्न सकिन्नथ्यो नी’ उनले थपे–‘आफुलाई पर्दा सांसद अपहरण गर्न राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने, जनताका लागि केहि गर्न नसक्ने ?’
आफना आसेपासे र भजन मण्डलीलाई जे गर्न पनि तयार हुने तर उनको गुणगान गाउँन नसक्नेको खेदो गर्ने ओली प्रवृत्ति गतल भएको पनि उनले वताए । ‘खेलकुदका रमेश सिलवाल, युवा परिषदका माधव ढुङ्गेलहरुलाई आफनो गुटका भएका हुनाले म्याद सकिदा पनि सर्लक्क निर्णय गरेर पुनर्स्थापित गर्नु भयो’ उनले भने–‘तर, नेपाली जनतालाई अँध्यारोवाट उज्यालोमा ल्याउने, डुवेको प्राधिकरणलाई उकास्ने र विद्युतमा आत्मनिर्भर वनाउने कुलमान घिसिङ्गलाई अपधस्थ गर्नु भयो । घिसिङ्गलाई किन फेरी ल्याउनु भएन ?’
स्वार्थ पुरा नहुने र कमिशन नआउने भएपछि कुलमानलाई हटाईएको उनको दावी छ । ओली पक्षमा लागेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफनै आफनै पार्टीका नेताहरुलाई तथानाम गालि गर्ने जतिलाई अहिले विभिन्न लाभका पदमा नियुक्ति गरिएको उनको भनाई छ । ‘तथ्य हेर्नु होला। जसको आलोचनात्मक चेतना छैन, दास चेतना भएका र मालिकको भक्तिभाव गरेर प्रसाद खान पाईन्छ भन्ने भजन मण्डली÷ ग्याङको वरीपरी हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री’–उनले भने।
म मात्र सर्वज्ञानी अरु केहि होईनन्
प्रधानमन्त्रीको घमण्ड, दम्भ र मुर्खताले नै पार्टी अहिलेको स्थितीमा पुगेको फुयलको तर्क छ । ‘वहाँ आफुलाई पुर्विय दर्शनको ज्ञाता हुँ भन्नुहुन्छ। गिताको प्रसस्त ज्ञान छ भन्नु हुन्छ । गिताको सार भनेको दम्भ, घमण्ड र मुर्खताले विनास गर्न भन्ने होनी त’ उनले भने–‘वहाँले के वुझनु भएछ त ? अध्ययन अनुसन्धान र विज्ञ भन्दा पनि म मात्र सर्वज्ञानी, मैले मात्र जानेको छु र म भन्दा वाहेक केहि होईन। म नभए पृथ्वी पल्टिन्छ भन्ने वुझाई नै वहाँका लागि घातक हो ।’ नियम विरुद्ध जानु भनेको प्रकृतिको विरुद्ध जानु हो र ओलीले प्रकृतिको विरुद्धमा काम गरेको उनको जिकिर छ।
भरोसा गर्नै नसकीने/ सहयोद्धाको राजनीति ध्वस्त
केपी ओली भरोसा गर्नै नसक्ने पात्र भएको फुयल वताउँछन् । जसलाई जे पद चाहिन्छ, वाँड्नु हुन्छ । तर, त्यसलाई इमान्दारीसाथ लागु गर्नु हुन्न। वामदेवका हजार गल्ति थिए होलान, थुप्रै नगर्ने काम पनि गरे होलान । तर, उनकै सहयोगले पार्टी अध्यक्ष, संसदिय दलको नेता भएका हिसावले वामदेवलाई सहयोग गर्नु पर्ने थियो नी। तर, ओलीले वामदेवकै राजनीति तहसनहस वनाउने काम गरे । सहयोद्धाको राजनीति ध्वस्त वनाउने काम गर्न मिल्छ ?
वामदेवलाई विभिन्न आस्वासन दिएर राष्ट्रिय सभामा जान रोक्नु ठुलो भुल भएको उनले वताए । ‘माधव नेपाल र प्रचण्डलाई पनि सधैंभरी अपमान गर्नु भो । यस्तो भएपछि अव अरुले वहाँलाई किन सहयोग गर्छन?’ उनले भने–‘सम्मान पाउन र सहयोग लिन त आफुले पनि गर्नु पर्यो नी ? म मालिक हुँ, सन्सारको जान्ने वुझने म हुँ, तिमीहरु सवै दास हौ भन्ने भएपछि आजको युगमा कस्ले मान्छ ?’
संसद पुनर्स्थापना गर्नु पर्छ, जनताको खोसिएको अधिकार फिर्ता ल्याउनुपर्छ
युवा नेता फुयलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको वताउँदै अवको विकल्प भनेको संसद पुनर्स्थापना मात्रै भएको वताए ।
त्यसका लागि नेकपाका नेताहरु प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र नारायणकाजीले जनतासँग माफ माग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हामीले सहि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति छान्न नसकेर ०७२ सालको संविधान पनि जोगिन्छ÷जोगीदैँन भन्ने अवस्थामा आईपुग्यौ । त्यसैले हामीलाई माफि दिनोस भन्ने हो’ उनले भने–‘हाम्रो गल्ति भए सजाय दिनोस। तर, हालसम्मको उपलब्धिको रक्षाका लागि सडकमा आउनुपर्छ भन्ने वेला आयो ।’
अदालतले नगरे सडकले संसद पुनरस्थापना गर्नुपर्ने उनर्को तर्क छ । ‘यो जनताको अधिकारको कुरा हो । ब्यक्तिका कारणले ब्यवस्थामाथि आएको संकटलाई पार लगाउनका लागि संघर्षमा आउनुको विकल्प छैन। खोसीएको उपलब्धी पुनर्स्थापित गर्नु मुख्य कुरा हो’–उनले भने।
यति वेला आममानिसले सर्वोच्च अदालतप्रति नै आशा र भरोसा गरको उनले वताए । अधिकांश पुर्व न्यायाधिसहरुले पनि संविधानमै नभएको काम भयो भनिरहेकाले अदालतले संसद विघटनलाई मान्यता नदिनेमा नेपाली जनता विश्वस्त रहेको उनको भनाई छ । ‘तर मलाई चै के लाग्छ भने, यो त ‘संवैधानीक कु’ हो । ‘कु’ चै एउटा डिजाईनमा हुन्छ । जनताका अधिकार खोस्ने र क–कस्का के–के स्वार्थ छन् मिलेर पुरा गर्ने’ उनको विश्लेषण छ–‘यदि मिलेमतोमा भएको हो भने संसद पुनरस्थापना पनि हुँदैन ।’
राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनु पर्छ
नेता फुयलले संविधान विपरित वलीले भने अनुसार संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउनु पर्ने तर्क गरे । ‘यो कदमले राष्ट्रपतिको गरिमामा पनि चोट पुगेको छ। ओलीले लाने वित्तिकै विज्ञ पनि नचाहिने ? जे लगेपनि सहि गरिदिने’ उनले भने–‘दलहरुको वुद्धि छ भने महाभियोग लगाएर हटाउनु पर्छ । पास नभएपनि दर्ता मात्रै भएपनि गर्नुपर्छ ।’
युवा कम्युनिष्ट नेता शिव फुँयलसँग नेपाल आजले गरेको विशेष कुराकानी हेर्न तलको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला।